12 Mmekọahụ Ajụjụ Women Nzuzo Chọrọ Answers To
Ụmụ nwanyị Private Talk: 12 Mmekọahụ Ajụjụ Women Nzuzo Chọrọ Answers To
Isiokwu:12 Mmekọahụ Ajụjụ Women Nzuzo Chọrọ Answers Tommekọahụ ajụjụ	Site: Fisayo
Ka-n'ihu ebe a, e nwere ndị ụfọdụ ajụjụ n'ókè ya na mmekọahụ na ndị inyom bụ oke egwu ịjụ si nkpu. Ha apụghị ịjụ enyi ha nwoke ma ọ bụ di, na n'aka ike ọbụna ịjụ ha gynecologists n'ihi na ha bụ Ihere na-achọ azịza ndị a. Ma ghara ichegbu onwe ya, ị ga-enweghị ka Google azịza ọzọ n'ihi na ajụjụ na-niile jụrụ na za ebe a.
Ọ kwere omume na-afụ ụfụ onye ibe m si amụ n'oge siri ike na mmekọahụ?
Azịza ya bụ ee. A nwoke amụ na-adịghị mere nke ọkpụkpụ ma ọ bụ ígwè, ọ bụ a ite na engorges na ọbara na mmalite, otú ifịk inyom on top nwere ike imerụ ihe ma ọ bụrụ na ọ ọkọkpọhi kwa-arụsi ọrụ ike na ịnyịnya ígwè. Ọ nwere ike ehulata na ọbụna iduga mmerụ ahụ na amụ, n'ihi ya, ọ kacha mma ka tụsara n'ihi na ọgan pụrụ-emebi na sụgharịrị jọrọ njọ mgbe edozi ịwa.
Ọ kwere omume n'ihi na condom ka ada oyi n'ime m?
Ọ bụ nnọọ nkịtị n'ihi na condom ileghara oyi n'oge ifịk mmekọahụ ma nke a na-adịkarịghị itịbe. Ihe kacha mma a nwaanyị nwere ike ime bụ ndidi weghachite roba wee hụ ya afọ ojuju e wusiri. Dị otú ahụ condom gaghị reused ọzọ ma a ọhụrụ otu. Ihe omume a na-eme na ndị na nnọọ obere akpan owo.
Gịnị mere m nwere ihe isi ike na ọbọ orgasm n'oge mmekọahụ?
Ị na-adịghị ihe ọ bụla na-eme gị ma ọ bụrụ na ị na-ada iji nweta orgasm n'oge mmekọahụ. Nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere orgasm n'oge mmekọahụ, ọzọ n'oge clitoral mmalite, ma ndị ọzọ site na imetọ onwe, na ndị ọzọ via a Nchikota ụzọ ndị ọzọ. Ọ ga-Otú ọ dị ike kwuru na nwanyị kwesịrị ekwesị ùgwù onwe onye na obi ike n'ebe bed iru-akwụsị oge ọ bụla; na ọ kasị mma na-anọ anya ọgwụ ọjọọ ebe ọ bụ na ndị a pụrụ isi metụta libido na-enwe mmekọahụ nzaghachi.
Gịnị mere m ịdị mkpa ka pee n'oge mmekọahụ?
Ọfọn, eziokwu ahụ bụ na mmetụta na-pee bụ naanị a mmetụta, adịkarịghị ọ dị onye na-ahụ mkpa na-pee n'oge mmekọahụ. Ọkachamara na-ekwu mgbe a nwaanyị chere n'onwe ya na-pee n'oge mmekọahụ, ọ pụtara ya nwoke na-apịa ọma n'elu ya G-ntụpọ nke a ga-fọrọ nke nta na-eweta ya nso orgasm.
Gịnị ka m pụrụ ime banyere mgbe m ikpu-eme ka na-ada n'oge mmekọahụ?
A na-akpọ queefing na e nwere n'ezie obere ka ihe ọ bụla i nwere ike ime banyere ya. Ọ na-adị mgbe ikuku tọrọ atọ gị "oven" nēwepuga dị ka ị na-kụrụ n'oge mmekọahụ, na o nwere ike eme eme ozugbo mmekọahụ. Nke a nwere ihe ọ bụla na-eme na ma gị na ihe bụ omume rụrụ ma ọ bụ uko.
M na-adịghị mgbochi mmiri n'oge mmekọahụ. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Na ọtụtụ ndị inyom na mmiri ga ala n'okpuru n'oge mmekọahụ foreplay na agụụ, ma nke a wetness nwere ike gharazie dị ka mmekọahụ eme ihe na-akawanye aba. Wetness na-eme ka ọ dị mfe maka gị nwoke ka banye n'ime gị na ọ na-egbochi merụrụ n'oge mmekọahụ, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị mgbochi mmiri n'oge foreplay ma ọ bụ mmekọahụ, mgbe ahụ i kwesịrị iji a mmanu dị ka a Vaseline jelii ịtụ onwe gị.
Onye ibe m chọrọ ihe gbasara ike. M Kwesịrị kwenye?
Ị ga-naanị kwenye ọ bụrụ na ị dịkwa mma na ya ma ọ bụ chọrọ na-enwe ịchọpụta. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-eme ka gị na onye òtù ọlụlụ ịghọta ihe mere. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga on, mgbe ahụ ị ga-eji a otutu Vaseline jelii ma ọ bụ ndị ọzọ na mmanu aka na na na-eji a condom iji chebe site bacteria na feaces n'oge-eme omume. The condom ga-agbanwe nke-ọzọ otù bụrụ na ị chọrọ ka ịgbanwee si gbasara ike ka mmamiri iji gbochie na-ebufe bacteria gburugburu.
Gịnị ka ọ pụtara ka a nwaanyị squirt?
Squirting bụ nwaanyị version nke a nwoke ejaculation. Women squirt n'oge mmekọahụ ma ọ bụ na imetọ onwe mgbe ha na-oké kpaliri ma hapụ ọmụmụ ha urethra. Ya anaghị eme eme mgbe niile n'oge na gaghị mgbagwoju anya na mmamịrị, ọ bụghị.
Amụ ya bụ curved. Enyemaka!
E nweghị enyemaka chọrọ ebe a ma ọ bụrụ n'ezie na ọ Peyronie ọrịa nke na-akpata mmadụ amụ na-curved dị ka a n'ihi merụọ ya n'oge mmekọahụ. Ma ọtụtụ ndị mmadụ curved penises na ọ pụtaghị ihe ọ bụla, N'ezie ọ pụrụ inyere ya aka see ị na-nri ebe mgbe ọ abatakwa. ndammana, ndị nwere dị iche iche nha, shapes, na na agba mgbe ọ na-abịa ha agha - dị nnọọ ka ndị inyom nwere dị iche iche ikpu na ara nha, shapes, na na agba.
M na-agbanwu mgbe na-ekiri nwanyị nwere mmasị nwanyị porn.
Nke a na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ na-emekwa ndị ọzọ anya. N'ihi na ndị inyom bụ ndị na-agbanwu mgbe na-ekiri ụmụ agbọghọ abụọ-eme ya na porn, ọ apụtachaghị na ha na-achọ ma ọ bụ chọrọ inwe akpachi anya na nwa agbọghọ ọzọ ma ọ bụ nwaanyị. Dị nnọọ ka a nwaanyị nwere ike nrọ banyere onye agbata obi ma ọ dịghị mgbe chọrọ n'ezie mmekọahụ eme na ya.
Gịnị ka m pụrụ ime ma ọ bụrụ na amụ ya bụ akụkụ dị nnọọ oke ibu ma ọ bụ ọbụna kwa obere?
Ọ dịghị ihe ị pụrụ ime ma na-ekwurịta banyere nke a ọnụ - karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eche na ihe ntà ma ọ bụ nnukwu onye na-ewute gị mgbe mmekọahụ. Ma ihe ọzọ: i nwere ike iji ọtụtụ mmanu ma ọ bụrụ na ngwá agha ya dị ọtụtụ ma ị nwekwara ike ịbụ on top nke mere na ị kpebiere N'ezie nke omume na a nnukwu ngwa; na na obere otu, gị Ihọd nwere ike na-agbalị ọnọdụ dị iche iche ma ọ bụ dị na-eji mkpịsị aka ya, ọnụ na-amasị gị.
Achọrọ m onye ibe m ịrụ ji ọnụ na m.
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị chọrọ ị ga-egosi ya. Ọtụtụ ndị ikom na-adịghị amasị inu ala n'ebe ahụ, ma ị ga-egosi onwe gị kwesịrị site n'ịbụ mma n'anya na ọhụrụ ala home. Ọ bụrụ na ọ bụ adịghị mma na-edeghị ede, ị ga-enyere site n'inye ya hints na ngagharị, ọsọ na mgbali o nwere ike emetụta na mwute akụkụ nke gị ọgba.
Nkeji edemede Site Sam
N'ihi na ihe ọmụma, -enye aka, nke ọma chọpụta Nde ahụ ike na mma ọdịnaya, nleta www.HealthFitnessResource.com
-Akpa na-ekwu okwu on "Ụmụ nwanyị Private Talk: 12 Mmekọahụ Ajụjụ Women Nzuzo Chọrọ Answers To"
Hapụ ikwu Kagbuo zara	Gị adreesị email gị agaghị bipụtara.CommentAha *
Ọ dịghị mkpa ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị: ngafe sugar ọjọọ n'ihi na ị na ọ na-egbu…
10 Jobs N'ihi Nigerians Ònye chọrọ ịga Gburugburu The World
mmekọahụ Dysfunctions: ụdị, akpata, mgbaàmà, na Ọgwụ